Ikhasino E-inthanethi Amukela i-EcoPayz
Ikhaya / Izindlela zokukhokha / amakhasino e-inthanethi amukela i-ecopayz
Amakhasino E-inthanethi Amukela i-Ecopayz
Uhlelo lwe-e-wallet, i-ecoPayz yinkampani ephethwe abaseBrithani eyasungulwa ngo-2000 ngaphansi kwegama elithi EcoCard. Kusukela yakhiwa kabusha ngonyaka u-2013, le nkampani iqhume, ikakhulukazi eNingizimu Afrika, lapho ukuphepha ku-inthanethi kuyinkinga yangempela. Njengamasistimu amaningi e-eWallet, i-ecoPayz ivumela amaklayenti ayo ukuthi asebenzise izimali ukukhokha abahlinzeki bamasevisi noma ukuthenga imikhiqizo. Ukuze wenze lokhu noma kunjalo, abantu ababhalisele i-ecoPayz badinga ukuxhasa ikhadi labo le-ecoPayz ngemali eyanele yokuthenga. Nakuba lokhu kungabonakala sengathi kunomkhawulo, empeleni kungenye yezinzuzo zokusebenzisa lolu hlelo, ngoba mancane amathuba okuthi uzidlulele ngokweqile ekusebenziseni imali. Uma ufuna ukuzikhawulela uma kuziwa ekufakeni imali ku-akhawunti yakho yekhasino, le yindlela engcono yokwenza.
I-ecoPayz inikeza abasebenzisi bayo izinzuzo eziningi kanye nezinto ezingenhle ezimbalwa. Uma ufuna ukuqala ukusebenzisa indlela yokukhokha ku-inthanethi emayelana nesipiliyoni somsebenzisi, lena ngeke idumaze. Njengezinhlelo eziningi ze-ewallet, iyenza izinkokhelo zibe lula futhi zisheshe, futhi ikwenza konke lokhu ngokuphepha. I-EcoPayz uhlelo ungathembela kulo ngakho-ke vakashela noma yimaphi amakhasino e-inthanethi ane-ecoPayz angenhla bese uzizamela ngokwakho.
Hlola uhlu lwamakhasino e-ecoPayz aphezulu esilubhalile ukuze kube lula kuwe ukuba uqale ukudlala. Uma unesikhathi, zama yonke ukuthola ukuthi kungani i-ecoPayz iyindlela elula yokubhenka ku-inthanethi e-SA.
Yimaphi amakhasino e-EcoPayz esiwancomayo kubantu baseNingizimu Afrika?
R200 Mahhala ayikho ibhonasi yediphozi + 200% Ibhonasi ne 50 Izikhathi Zokudlala Mahhala
R300 Ama-No Deposit Bonus + 200% Ibhonasi Lokukwamukela
Ize ifike R15,000 + 200 Ibhonasi Lokukwamukela lama-Free Spins
Ize ifike R15,000 Mahhala + 150 Ibhonasi Lokukwamukela lama-Free Spins
R37,500 Ibhonasi Lokukwamukela + R300 Ama-No Deposit Bonus Amahhala
R9,999 Ibhonasi Lokukwamukela + R300 Ama-No Deposit Bonus Amahhala
Ukusebenzisa i-ecoPayz Emakhasino aseNingizimu Afrika
I-ecoPayz iyahambisana namabhange amahlanu aphezulu aseNingizimu Afrika futhi lokhu kungaba ngesinye sezizathu zokwanda kokuthandwa ngabantu ezweni. Noma ngabe ubhenka ne-FNB, ne-Absa, ne-Capitec, ne-Nedbank noma ne-Standard Bank, uzokwazi ukufaka imali ekhadini lakho le-ecoPayz bese ukhokhela i-akhawunti yakho yekhasino ye-inthanethi.
Ukuqala ukusebenzisa i-ecoPayz, uzodinga ukubhalisa i-akhawunti. Le inqubo elula futhi iqala lapho uvakashela iwebhusayithi yayo bese ugcwalisa ifomu lokubhalisa. Uzokwaziswa ukuthi ukhethe iphasiwedi bese ufaka umbuzo wokuphepha, okwenza uhlelo lube nzima kakhulu ukugqekezwa izigebengu ze-cyber futhi luphephe kakhudlwana kuwe. Uzothunyelwa isixhumanisi sokuqinisekisa nge-imeyili futhi uma usichofoza bese uqinisekisa i-akhawunti yakho, uzokwazi ukufaka imali kukhadi lakho futhi uqale ukudlala emakhasino amukela i-ecoPayz cishe ngokuphazama kwehlo.
Ukudiphozitha nokukhipha imali emakhasino nge-ecoPayz
Uma usukhethe ikhasino ye-inthanethi eyamukela i-ecoPayz (ubheke uhlu lwethu ngenhla uma ungenaso isiqiniseko sokuthi iyiphi engcono), kuyashesha futhi kulula ukudiphozitha. Ungathola ukuthi kunemikhawulo ethile yediphozithi kanye nenani elikhulu nelincane lokudiphozitha nokukhipha imali, ngakho-ke qiniseka ukuthi ubheka imikhawulo ekhona ekhasino oyikhethayo. Inani lediphozithi livamise ukuqala ku-R25 kanti inani elincane ogalikhipha livame ukuba ngu-R500, kepha lokhu kuyehluka ngokuya ngekhasino nekhasino.
Ukudiphozitha imali ku-akhawunti yakho yekhasino, kuzodingeka uvakashele ukheshiya bese ukhetha i-ecoPayz njengendlela yakho yokudiphozitha. Kuzodingeka ukuthi uhambe ngenqubo yokuthola imvume ye-ecoPayz, ufake iphasiwedi yakho bese ukhetha inani lokudiphozitha. Nakuba lokhu kungase kubonakale kuyinqubo ende kunaleyo ongayithanda, khumbula ukuthi lokhu kwengeza izinga lokuphepha, okungasiza wena kuphela.
Ukukhipha imali cishe kwenzeke lapho uchofoza uma kuziwa ku-ecoPayz, ngakho ungamangali uma imali oyikhiphile ivela ku-akhawunti yakho ngokushesha ngemuva kwekhasino icubungula isicelo sakho. Amanye amakhasino azokucela futhi ukuthi ugcwalise ifomu elicela inkokhelo ngaphambi kokuthi ikhiphe noma iyiphi imali.
Ingabe ukusebenzisa i-ecoPayz kuphephile?
Omunye wemibuzo evame ukubuzwa ngabantu mayelana ne-ecoPayz, noma enye indlela yokukhokha yasekhasino ye-inthanethi mayelana nalolu daba, ukuthi ingabe kuphephile yini. Njengoba ubugebengu obenziwa kumakhompyutha buyanda eNingizimu Afrika, abantu bavame ukungabaza ukubeka imininingwane yabo yezezimali ku-inthanethi. Impendulo elula ukuthi i-ecoPayz uhlelo oluphephile nolunokwethenjelwa, oluthenjwa ngabadlali abaningi nolwandayo ekuthandweni kakhulu eNingizimu Afrika ngoba luphephe kakhulu.